Umaka: ukuhaha | Martech Zone
Ukuhaha, Ukwesaba kanye Nosomabhizinisi Abahlulekile
NgeSonto, ngoJulayi 25, i-2010 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Umehluko omkhulu kunayo yonke engiyibonile kuzo zonke izinkampani engizisebenzelayo ukuze ngiphumelele uma ngiqhathaniswa nokwehluleka yikhono lokuthi usomabhizinisi noma ibhizinisi likwenze empeleni. Kuyangikhathaza ukubuka abangane nabosomabhizinisi engikanye nabo bengayiboni impumelelo yabo ngenxa yokuthi abenzi kahle. Ukwesaba nokuhaha yizinto ezimbili engizibonayo ezivimba osomabhizinisi emikhondweni yabo. Nazi izibonelo ezimbalwa: Usomabhizinisi A unomkhiqizo omuhle osebenzayo
Ingabe i-Google izama ngempela ukwenza iwebhu ibe ngcono?
NgoMgqibelo, Novemba 14, 2009 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Esikhathini esedlule, iGoogle yafaka ilungelo lobunikazi ekuhlaziyeni ukubhaliswa kwesizinda njengengxenye yegunya lesiza. Umphumela waba ukuthi yonke imboni ye-blogosphere ne-SEO yaqala ukweluleka amaklayenti ukuthi abhalise izizinda zawo isikhathi esiphezulu. Ngaze ngabhala ngayo muva nje .. futhi ngabukelwa ngumngani omuhle uPJ Hinton waseCompendium Blogware (bona imibono). Manje iGoogle isiya phambili kancane endleleni yayo - ngokuwa kukaMat Cutts